Kedu ihe dị njọ na akụkụ anọ nwere akụkụ anọ? | Martech Zone
Tọzdee, Eprel 7, 2011 Friday, April 8, 2011 Douglas Karr
I should not just pick on Foursquare… M nwere otu ihe iseokwu na kasá »‹ mmadá »social mgbasa ozi ngwa. Nsogbu di otu ihe na ihe obula. Na Foursquare, nsogbu a doro anya karịa, n'agbanyeghị. Ndị ọchụnta ego chọrọ iji ohere nke ikpo okwu - mana ọ nweghị ụzọ isi mee ya.
N'ihi ya, ị nwere ihe nzuzu dị ka nke a… ụlọ ọrụ na-adịghị nso m na ndị m na enweghị mmekọrịta, na-arịọ m ka m bụrụ enyi ha.
Enwere ohere ọ bụla na ọ bụ spammer, mana ejighị m n'aka. N'ezie, nke a nwere ike bụrụ azụmahịa nke zubere m ma chọọ ka ha na ha nwee mmekọrịta. N'ezie, ezigbo nsogbu bụ na ọ nweghị ụzọ ọ bụla ha ga-esi mee ya na Foursquare - yabụ ha ga-eji usoro a.
Mmekọrịta dị n'etiti azụmahịa na ndị ahịa kwesịrị ịkwụsị ịbụ ihe a ga-eme mgbe ha mepụtara usoro mgbasa ozi mmekọrịta ọhụụ. Ọ dị ka naanị oge a na-enye ndị azụmaahịa ohere na azụmaahịa ndị a bụ mgbe ọ dị mkpa ị nweta ego. N'ihi ya, Foursquare pụrụ iche.
Ọ bụrụ na m na-azụ ahịa, M nwere ike biputere a pụrụ iche na Foursquare n'ihi na-eji ọkụ na-uru nke… ozugbo ha ego-na. Enwere okwu ọzọ na Foursquare. Imirikiti azụmaahịa adịghị mkpa ịrata ndị ahịa mgbe ha abatala n'ọnụ ụzọ ụlọ - nsogbu bụ ịnweta ha na ọnụ ụzọ ụlọ.
Oghere anọ na-efu nnukwu ohere ebe a. Ndị ahịa chọrọ ijikọ na azụmaahịa - nke ahụ dị iche karịa ka ndị azụmaahịa rịọrọ gị ma kpọsaa ya. Mgbasa ozi anaghị arụ ọrụ… mmekọrịta na-eme. Kedu ihe ma ọ bụrụ na okpukpu abụọ, kama nke ahụ, nye gị interface dị ọcha dị mma iji chọta ebe ndị gbara gị gburugburu nke ndị enyi gị na-agakarị - yana ngwaọrụ nkewa ka ị nwee ike ịkekọrịta ụdị azụmahịa ahụ.
Ma gịnị ma ọ bụrụ na Foursquare nyere ndị azụmaahịa ohere ibipụta onyinye na netwọkụ ndị enyi gị ma mee ka ha sonyere gị mgbe ị banyere? Ugbu a nke ahụ ga-abụ ngwá ọrụ nke azụmaahịa na ndị ahịa ga-enwe ekele maka ya!
Ikekwe ihe ọzọ mere m ji chọọ ịchọpụta ma zụlite ngwa ekwentị a m na-atụgharị na ihe isi awọ nwa oge.